१३ वर्षीया किशोरीको दा’बीः ‘मलाई १० वर्षे प्रेमीले ग’र्भवती बनाए’ - Kohalpur Trends
१३ वर्षीया किशोरीको दा’बीः ‘मलाई १० वर्षे प्रेमीले ग’र्भवती बनाए’
trendsminad January 30, 2021	No Comments
एक १३ वर्षीया किशोरीले आफूलाई १० वर्षे प्रेमीले ग’र्भव’ती बनाएको जानकारी दिन टिभीको सहायता लिएकी छिन् । यी दुई दार्या र इभान केही समयअघि रसियाली टिभी शो ‘अन एयर लाइभ’ मा आफ्नो वि’वा’दा’स्पद गर्भबारे जानकारी दिन, विज्ञमार्फत् परीक्षण गराउन उपस्थित भएका थिए । इभानले आफ्नी १३ वर्षीया प्रेमिकालाई ग’र्भव’ती बनाएको खबर गत हप्ता रसियाली सोसल मिडियामा प्रकाशित भएको थियो । यद्यपि, यो जोडीको अभिभावकले अहिले मात्र उनीहरुलाई आफ्नो पहिचान संसारमाझ उजागर गर्न अनुमती दिएका छन् ।
१३ वर्षीया ती किशोरीले आफू इभानबाहेक अन्य कोहीसँग पनि इ’न्टिमेट नभएको दाबी गरेकी छिन् । उनको कुरा म’नोविद्ले विश्वास गरेका छन् तर विज्ञले भने इभानले कसैलाई ग’र्भव’ती बनाउन उनी निकै नै कम उमेरका छन् भन्दै यसलाई गलत बताएका छन् ।
‘कुनै गल्ती नहोस् भन्दै हामीले प्रयोगशालाको नतिजा एक पटक होइन, दुई पटक पनि होइन, तीन पटक परीक्षण गरेका छौं,’ यू’रो’लो’जी र ए’न्ड्रो’लो’जी ए’क्स’प’र्ट डा. ए’भगेनी ग्रे’कोभले उक्त कार्यक्रममा भने । ‘त्यसमा शु’क्र’कि’ट थिएनन् । ऊ अझै बच्चै छ । उसको टे’स्टो’स्टे’रो’न’स’मे’त छैन । यहाँ थप्नु पर्ने कुरा के छ भने उसको यौ’वन नै सुरु भएको छैन । त्यसकारण हामीसँग धेरै प्रश्न छन् ।’
ग्रे’कोभको प्रमाणपछि पनि यी दुई र उनका अभिभावकले दा’र्याले भनेको ठिक हो भन्ने दा’बी गरिरहेका छन् । उनीहरुका अनुसार यी दुईले इभानको घरमा एक पटक यौ ‘न स’म्ब’न्ध स्था’पित गरेका थिए जसका कारण १३ वर्षे उनी ग’र्भव’ती भइन् । उनले १० वर्षे बालकले त्यस्तो गर्न नसक्लान् भन्ने सोचेको तर अहिले उनको त्यो सोचाई गलत भएको दार्याले बताएकी छिन् ।
‘त्यो उनैको आइडियो थियो, तर यसमा मलाई कुनै आ’प’त्ति थिएन,’ दार्याले भनिन् । ‘१० वर्षमा कसैले यस्तो गर्न सक्ला भनेर मैले सोचेकी थिइन् । मैले त्यतिबेला केही पनि नहोला भनेर सोचेँ ।’
इभान आफैंलाई पनि प्रेमिकालाई ग’र्भव’ती बनाएको कुरामा विश्वास छैन तर जब उनलाई उक्त बच्चा तिम्रो होइन त भनेर प्रश्न सोधियो तब उनले भने, ‘त्यस्तो हुन सक्दैन ।’
‘मेरो छोराले ऊ बच्चाको बुवा हो भनेको छ, म उसलाई विश्वास गर्छु,’ इभानकी आमा गा’लि’नाले भनिन् । ‘ऊ बच्चै छ, सायद उसलाई के भएको थियो भन्ने बारे राम्रोसँग थाहा छैन ।’
दार्या र उनकी आमाले त्यो बच्चा राख्न चाहन्छन् तर बच्चाको बुवा इभान हो होइन भनेर अहिले नै परीक्षण गर्न नसकिने बताइएको छ । रसियाली स्रोतका अनुसार यस्ता परीक्षण पछि मात्र गर्न सकिन्छ ।
Previous Previous post: पीएम कप फाइनल : आर्मी टस हारेर एपीएफविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै
Next Next post: करिनाको छोरा तैमूरको हेरचाह गर्नेलाई डेढ लाख तलव
नजिकिंदै फोटो फेस्टिवल
trendsminad February 25, 2021	No Comments
तयारी तीव्र, फोटो आउने क्रम जारीआगामी मंगलवार र बुधवार नेपालगन्जमा आयोजना गर्न लागिएको दोस्रो नेपालगन्ज फोटो फेस्टिवलको तयारी तीव्र पारिएको आयोजक अन्तरालले जनाएको छ ।आयोजकका…
‘सर्वोच्चको फैसला सानो जित मात्र हो’
१३ फागुन, काठमाडौं । गत पुसदेखि लेखक सञ्जीव उप्रेतीको परिचय सक्रिय नागरिक अभियन्ता बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद…
संसदले नै नेकपा फुटाउन सक्छ ? प्रदेशको नजिर के छ ?
१३ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विभिन्न पार्टीका नेता र विज्ञसंग परामर्शमा जुटेका छन् । सभामुखको सचिवालयका अनुसार सापकोटाले बुधबार संघीय…
स्थानीय सरकारको विश्वव्यापी नेटवर्कको क्षेत्रीय अध्यक्षमा मेयर व्याञ्जु
१३ फागुन, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यताप्राप्त विश्वभरका स्थानीय सरकारहरुको साझा संस्था युनाइटेड सिटिज लोकल गभर्नमेन्ट एसिया प्यासेफिक, साउथ एन्ड साउथ इष्ट एसिया अध्यक्षमा नेपाल…
trendsminad February 25, 2021 No Comments